Ini ndinogona ndiyani ngochani nekungotarisa kunge mitezo yebonde
Kupisa vasina kupfeka varume fucking varume » Zvakaoma Fuck »Ini ndinogona ndiani ari ngochani nekungotarisa tumblr
Skip navigation! Nyaya kubva kuTech. Kwidziridzo: Chikunguru 5, Tumblr yakawedzera zvimwe zvinodzora ku Safe Mode. Zvino, iwe paunoenda kuapp mune zvigadziridzo zvako unogona kukopa Safe Mode uye sarudza kubva pane imwe yenhatu sarudzo: "Viga zvese zvinonzwisisika zvemukati, ingovanda zvakavanzika zvekutsvaga mhinduro, kana usavanza chero chinhu.Chinyorwa ichi chakatanga kubudiswa munaJune. 9, Kana iwe uchitsvaga nzira iri nani yekuona zvinonyadzisira pane yako iPhone, Tumblr's akakufukidza.
Munoona, izvo ndizvo zvinoita programu.
ngochani | Tumblr
Munhu wekutanga wandakauya kwaari aive shamwari yangu yepamwoyo, Kay, uyo anongoitika kuva lesbian, saka nekudaro akazvitora mushe. Iye munhu wandauya wandakaudza imwe shamwari yangu yepamoyo, Mary. Mushure mezviitiko izvozvo zvakafamba chaizvo ndakaudza shamwari dzangu mbiri dzakashama kwazvo dzehurume. Zvakatora kanguva kuti ndivatsanangurire chaizvo izvo kuti it is pansexual asi Nat anozozvigamuchira. Ndakafunga Kay achazova uya wandingataure naye, mushure mezvose zvaari ane ruzivo rwunobuda. Asi haangambonzwisise kuti zvinonzwika sei kuve mune yekuvhara mune yekuchengetedza-christian dzimba dzechikoro nharaunda kana akaenda kuchikoro chepamusoro uko hafu yevana vari ngochani. Iye munhu anotevera wandakafunga kuti ndichagona kutaura naye ishamwari yangu yepamoyo Mary.
Kuwana Zvinonyadzisira PaTumblr Ingowana Gumbo Rakareruka
Saka ndinovagadzirira majasi madiki kuti avadzivirire panguva yavo yekutanga yechando:. Uye kana vakazviita kuburikidza nechando uye tikazvitarisira zvakanaka, ivo vachakura kuva vakasimba uye vakangwara savakuru vavo vakuru:. Ini ndinoda fanika, uye ini ndinoda chimiro chayo uye icho chinowanzotarisa pairi, uye ini handina zvakaipa zvakawanda zvekutaura nezvazvo, nokutendeka. Uye ndakafunga kuti, "Hazvina kana chinhu zvacho.
Pakutanga yakatumirwa stydiaislove. Pakutanga yakatumirwa nemaheymorons. Izvo zvisina hutano? Inoita kuti ndinzwe kunge ngochani kupfuura zvandakamboita.
Tags: ini + ndinogona + uyo + ari ngochani + chete + na + kutarisa + tumblr
Que enrabada da porra ... enta macio.
Kuda chikamu chavoi chakandibatidza
Chii chinonzi zita remuvhi?
Ngochani droppin mitoro mune pussy tumblr
Jocks ngochani kurara pabonde vhidhiyo tumblr